पंजाब गेम, विवरण, प्रो र कन्स: समीक्षा
धर्म र आध्यात्मिकता सिख लाइफ र संस्कृति
पंजाबी स्क्रैबबल मजा संग गुरुमुखी वर्णमाला
पंजाबले क्यानाडा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक यदवीर सिंह थिन द्वारा डिजाइन गरिएको एक मनोरञ्जन खेल हो जुन गुरुङ को वर्णमाला ग्रिड सिक्न को लागी सहायता को रूप मा। पंजाब भाषा शब्दावली र हिज्जे मा कौशल को निर्माण को प्रोत्साहित गर्दछ। खेलाडीहरूले अंकहरू कमाउन धर्मशास्त्रको पढ्दा गर्बनीको ज्ञान बढेर लाभ उठाउँछन्। पंजाबले पनि गोल गर्दै राख्दा गणित कौशललाई सुधार गर्न एक मजेदार तरीका पनि हो। बहुमुखी पंजाबी स्क्रैबल खेल सबै उमेर र कौशल स्तरका खेलाडीहरूले विभिन्न तरिकामा खेल्न सक्छन्।
1 वा धेरै खेलाडीहरूको लागि Punjabble खेल खेल्ने5तरिका: समीक्षा
पंजाब खेल बक्स
Punjabble खेल टुकडे। फोटो © [पार्वती पंजाब]
पंजाब गेम गेम एक चमकदार टुकडे टुकडे गत्ता बक्से मा पैक गरिएको छ र रंगीन कवर आमंत्रित खेल संग। बलियो पंजाब गेम बक्से 6/4 इन्चले 8 1/4 इन्चको उपासना गर्दछ र 1 3/4 इन्च गहिरो छ, सबै पंजाब बजाउने टुक्राहरू समात्न सकिन्छ।
Punjabble Players Pros and Cons
पंजाबलाई कसरी खेल्न सकिन्छ? फोटो © [पार्वती पंजाब]
खेलकुद गर्ने तरिकाका लागि निर्देशहरू र विचारहरू Punjabble खेल बक्सको पछाडि छापिएको छ।
पंजाबलाई विभिन्न कल्पनामा मात्र खेल्न सकिन्छ जुन कल्पनाले मात्र सीमित हुन्छ।
पंजाबले शुरुवात, मध्यवर्ती वा हरेक उमेरका उन्नत खेलाडीहरूले खेल्न सक्छन्।
पंजाब बजाउन सिकाउने गुरुमुखी अङ्ग्रेजी, गर्बानी शास्त्र र पंजाबी भाषा को प्रचार गर्दछ।
पंजाबबललाई मात्र एक्लो मज्जाको लागि, वा परिवार र साथीहरूसँग, घरमा, कक्षाकोठामा, वा गुरुम शिविर प्ले गर्नुहोस्।
स्कूल पंजाब द्वारा आयोजित चैंपियनशिप टूर्नामेंटहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल पंजाबलाई प्ले गर्नुहोला।
पंजाबले कल्पनामा धेरै मात्रामा निर्भर गर्दछ। खेल बोर्ड, अक्षर ट्रेहरू, स्कोरकार्डहरू, ताराङ्कित पोइन्ट पिनहरू, र डेलक्स संस्करणमा विस्तृत निर्देशनहरू समावेश गर्न सकिन्छ।
Punjabble Playing Pieces र Game Grid Description
पंजाब अकबर गेम ग्रिड। फोटो © [एस खालसा]
पंजाबले 108 ग्राम टुक्रा खेलिरहेका टुक्राहरू गुरूको पत्र, खेलकुद र भण्डारणको लागि एक कालो मखमल थैली, र गुरुमुखीगागा मैट्रा स्वरहरूको लागि एक सूखा मेट मार्करको साथ छापिएको छ । ग्लोसी टाइल्सको बारेमा लगभग2इन्च स्केलको मापदण्ड र बोल्ड ब्लु गुरुमुखी अष्ट पसलहरु संग उभिएको छ। प्रत्येक टाइल माथिल्लो बायाँ कोनेमा फोनेटिक अंग्रेजी ट्रान्सलिटेरेशन अक्षरसँग चिन्ह लगाइएको छ, र तलको दाँया कुनामा कमाई गरिएका अंकहरू अंकहरू। प्रत्येक अहर कन्टोनन्ट2टेलुएलको एक सेटमा आउँछ जुन2मात्र टाइलहरू हुन्छन्। यस खेलमा पनि7खाली खाली टाइलहरू छन् जुन पुरानो मिसन, वाइल्ड कार्ड वा जोकरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पंजाब खेल आदेश जानकारी
पंजाब खेल बक्स। फोटो © [पार्वती पंजाब]
पंजाब एक विकसित खेल परियोजना हो र धेरै विकासशील र सुधारिएको चरणहरु मार्फत आएको छ। वर्तमान Punjabble खेल को आपूर्ति सीमित हुन सक्छ। प्रि-अर्डर गर्ने र बल्क आदेशहरूको बारेमा सोध्नुहोस्।
Punjabble वेबसाइट मा अर्डर फारम भरें। लगभग 10 डलर क्यानाडा प्लस शिपिंग र हैंडलिंग तिर्न अपेक्षा। शिपिंग लागत यूएस वा क्यानाडा $5- $6को रूपमा घरेलू रेंजमा छ जहाँ पंजाबले आदेश दिएपछि एक हप्तामा पुग्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय दरहरू अष्ट्रेलिया जस्तो टाढाका ठाउँहरूको लागि लगभग $ 16 सम्म पुग्छ।
खेल को आदेश को बारे मा पूछताछ कसरि उच्च स्कोर पंजाब प्यान्स को लागि चैंपियनशिप लीग को लागि आदेश को लागि कि टीम को टूर्नामेंट चुनौतीहरु लाई थाहा छ कि उनि को बिरुद्ध को बारे मा बताउन को लागि प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
एक योगदानकर्तालाई विचार गरौं र तपाइँको समुदायमा सिख छोराछोरी र वरिष्ठहरूका लागि पंबिलर खेलहरू उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नुहोस्।
Punjabble को लागि एक अर्डर प्लेस गर्नुहोस्
इमेल: yad.thind12@gmail.com अधिक »
Gurmukhi वर्णमाला चार्ट। फोटो © [एस खालसा]
10 गुरूमुची र गर्बनी सिख धर्मशास्त्रको लागि 10 सुझाव
प्रकटीकरण: एक समीक्षा प्रति प्रकाशक द्वारा प्रदान गरिएको थियो।
गोर्खा को बारे मा सिखहरु को उपासना को बारे मा
लंगार को सिख भोजन संस्कृति
चार लावा: सिख वेडिंग भजन
किन सिखहरूले टर्बान्स पहनाउँछन्?
लैङ्गार र गुरुको नि: शुल्क भान्साको बारेमा सबै
कसरि Kirpans यात्रा गर्न सक्छन् हवाई जहाज मा
के सिख धर्म टाटुको अनुमति छ?
सबैको जीवनको बारेमा सिख धर्मको कार्यक्रमहरू
"सिख गुरुस रेटोल्डको इतिहास" द्वारा सर्जित सिंह गांधी: समीक्षा
शास्त्रीय भारतीय संगीत साधन संसाधन
सिख क्रिया कर्म भजन, प्रार्थना, र पदहरू
सबै समय को 25 बर्गर रैप गीत
डिकन्स 'ओलीवर ट्विस्ट': सारांश र विश्लेषण
नल शस्टरमैन पुस्तक समीक्षा द्वारा अनभिन्ड गर्नुहोस्
ESL Intonation - तनाव प्रकारहरू
शीर्ष 17 बाटाटा कलाकारहरू
"मेरो डाडर्स" - नमूना आम आवेदन निबंध विकल्प # 1 को लागि
जिमनास्टिक्स मा अमेरिकन कप को अवलोकन
अमेरिकी क्रांति: लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बर्गोनी
मीठा बिरार कलेज जीपीए, एसट र एक्ट डाटा
वरिष्ठ ब्रिटिश ओपन
आधुनिक घर, 20 औं शताब्दी को एक दृश्य टूर
शनि सातवें घर मा
एलन पार्ट्रिज उद्धरण
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष चित्रकारी
विद्युत प्रतिरोधकता परिभाषा
मौसमको पूर्वानुमान गर्न बादल प्रयोग गर्दै
जलाउने पातहरू तपाईंको स्वास्थ्यमा खतरनाक हुन सक्छ
जापानी शब्द Jiyuu कसरी प्रयोग गर्ने
विनाशकारी नरम रक: रोटी (द ब्यान्ड)
कसरी नक्कली घावहरू र क्याप्टहरू सिर्जना गर्नुहोस्
के व्हील सुत्नुहुन्छ?
एक्सेन्टको क्रिसमस के हो?
नियन्त्रित प्रयोगहरू के हो?
मच्छर - परिवार Culicidae
ईसाई धर्म को स्केप्टिक्स को लागि शीर्ष पुस्तकहरु